Bahrain: Fampitahana ny fomba fiasan’ny Bahrainita sy ny Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2008 20:09 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, Português, English
Mpamaham-bolongana Bahrainita Yagoob izay mianatra any Japana amin'izao fotoana izao – dia manatri-maso ny lazan'ny fitiavan'asa eo amin'ny Japoney. Amin'ity lahatsoratra ity ary no anehoana anareo ny fampitahana ny fomba fiasan'ny maro amin'ny Bahrainita sy ny fanaon'ny Japoney.
Miainga amin'ny tranga faratampony i Yagoob amin'ny fanaon'ny mpiasa iray mba tsy hialan'ny karamany amin'ny andro iray:
Fotoana vitsivitsy lasa izay dia nisy andian-dahatsoratra niseho tamin'ny gazety tany an-toerana nisarika ny masoko, indrindra moa fa teo amin'ny fampitahana ny fisainan'ny Bahrainita sy ny an'ny Japoney eo amin'ny resaka fanajan'ny tsirairay ny asany. Voalohany, tao amin'ny gazety Akhbar Al Khaleej, dia nisy lahatsoratra iray nitantara ny iray tamin-dry levendrana miasa ao amin'ny biraon'ny Gulf Air akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Bahrain, izay nitsaho tany amin'ny biraony fa misy baomba ao am-piasana – ary dia nitarika fanalana ny olona rehetra tao izany ka nandany ny andro manontolo, izay midika ihany koa ho fahaverezam-bola sy fahaverezam-potoam-piasana.
Ny anton'ity hevitra kidaladala ity dia noho ny aretim-bavoniny, lany avokoa ny andro ahazoana tsy miasa noho ny aretina, nefa tsy te-hampihena ny karamany, tsy te-ho very karama iray andro izy. Ankehitriny moa nahafantatra ny niavian'ny antso tao anatin'ny fotoana fohy ny mpitandro ny filaminana, efa hadihadiana ny lehilahy, ary mampanahy ny ho avinn'y asany sy ny fiainany manontolo. Izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fitiavana ho very dinars vitsivitsy.
Rehefa avy niteny ity fomba fiasa ity i Yagoob dia niteny hoe:
Ny tiako lazaina dia hoe tena mba ilaozan'ny toetr'andro koa izany fomba fiasantsika aty Bahrain malalantsika ity; Mikofokofoka sy miezaka mafy ery ny sasany mitady fomba tsy iasana (indrindra ny any amin'ny asam-panjakana). Mino izy ireo fa efa tsara toerana, tsy hisy intsony ny afaka hanala azy na dia ratsy fiasa aza izy ireny. Mirehareha izy ireo tsy miraharaha ny asany amin-javatra tsy misy dikany sy ny tsy misy ilàna azy. Etsy andaniny indray, maro ny mpampiasa no maneritery ny mpiasa miasa mafy sy miasa tsara, ka mitady fotoana fanararaotra hanesorana azy ireny mba hametrahana olona tsy haninon-tsy haninona hisolo ireny (mpiasa mazoto ireny).
Avy eo izy dia mitodika amin'izay zavatra hitany tany Japana amin'izay:
Raha mijery ny fisainan'ny Japoney kosa anefa isika amin'ny resaka asa, dia ho hitantsaika fa maro amin'izy ireo no manao ho laharam-pahamehana amin'ny fiainany ny asa. Ohatra, mahita ny sasany amin'izy reny aho aty amin'ny anjerimanontolo; Misy mpampianatra tonga amin'ny 7 ora maraina (nefa ny fidirany miasa amin'ny 8:45 maraina) ary indraindray mody amin'ny 7 na 8 ora hariva (nefa amin'ny 5 sy sasany hariva no mirava).
Aoka anefa hotsarovana fa maro amni'izy ireo no tsy mipetrak eto an-tanàna fa any an-tanàna hafa izay andehanana (fiara) ora iray na roa ay eo am-piasany. Tsapako fa tsy manana fiainana ara-piaraha-monina izy ireo fa tahaka ny fasana (trano lao tsinona koa) ny tranony izay tsy misy hanaovana azy afa-tsy atoriana fotsiny.
Ankoatra izany, raha misy marary nefa mbola afa-miasa ihany (tratran'ny sery, sns) dia mandeha miasa ihany izy fa maizaka ny manao sarom-bava sy orona mba tsy hamindra ny aretiny amin'ny hafa, ary mba hampihena ihany koa ny fahazoan'izy ireo ny aretina fandrao mandao tsy fidiny ny asa.
24 Novambra 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana